Impembelelo yeCoattail - Inkcazo kunye nemizekelo
Indlela Impumelelo yeCoattail isebenza ngayo kwizopolitiko zaseMerika
Impembelelo ye-coattail yikota kwizopolitiko zaseMelika ezisetyenziselwa ukuchaza impembelelo yomntu othandwayo okanye ongathandekiyo kunabanye abaviwa kunyulwa olufanayo. Umgqatswa odumileyo unokunceda athile amanye amathemba aKhetho loNyulo, ngelixa umviwa ongathandekiyo angaba nempembelelo echasene nayo, adibanise ithemba labo baqhube kwiiofisi ezisezantsi kwivoti.
I-term coattail yempembelelo yezopolitiko itholakala kwizinto eziphathekayo kwi-jacket exhomekeke ngaphantsi kwala manqeni.
Umviwa okhetha ukhetho ngenxa yokuba udumo lomnye umviwa luthi "lufakwe kwi-coattails." Ngokuqhelekileyo, i-term coattail yempembelelo isetyenziselwa ukuchaza impembelelo kamongameli weengqungquthela kwiintlanga zenkqantosi kunye nemithetho. Inwaba yolonyulo inceda ukwandisa ukuvota kwabavoti okanye abavoti banokuthi bavote ukuvota ithikithi "elichanekileyo".
I-Coattail Impumelelo ngo-2016
Ngo-2016 ukhetho lomongameli, umzekelo, ukusekwa kweRiphablikhi kwanyuka ngokuxhalaba ngabaviwa bayo kwiSenate neNdlu yase-US xa kucaca ukuba uDonald Trump wayengumviwa onamandla kakhulu wokutyunjwa kukaMongameli kwimigqaliselo. Abademokhrasi, okwangoku, babenomdla wokuba baxhalabe malunga no- Hillary Clinton , owayengumsebenzi wezopolitiko ophazamisayo owake wahluleka ukuvelisa inkululeko phakathi kwephiko leDemocratic Party eliqhubela phambili okanye elizimeleyo.
Kungatsholwa ukuba iTrump kunye noClinton babenempembelelo ye-coattail kwi-2016 yonyulo yebandla kunye neyomthetho.
Ukumangalisa kweTrump phakathi kwabasebenzi abavoti abamhlophe- amadoda namabhinqa ngokufanayo-ababaleka kwiDemocratic Party ngenxa yesithembiso sakhe sokuphinda baxoxisane neentengiso zorhwebo kunye neerhafu ezihlawuliswayo kwiimpahla ezizweni ezivela kulezi zizwe zanceda baphakamisa amaRiphablikhi. I-GOP yavela kwintlanganiso yamandla kwiNdlu yase-US kunye neSenate kunye neendawo ezininzi zamagumbi omthetho kunye neendlunkulu zendlu.
Ngokomzekelo, uSomlomo weNdlu uPaul Ryan , wavuma ukuba u-Trump ngokuncedisa amaRiphabhulikhi akhusele izikhulu kwiNdlu kunye neSeti. Uninzi lweNdlu lukhulu kunokuba ulindelwe, sinezihlalo ezingaphezulu kunabani na abalindelweyo, kwaye uninzi lwalo lubonga uDonald Trump. UDonald Trump wanikezela uhlobo lwezambatho ezinabantu abaninzi ekupheleni komgca ukuze sikwazi ukugcina Iqumrhu elomeleleyo kunye neentloko zeeSenethi. Ngoku sinomsebenzi obalulekileyo wokwenza, "kusho uRyan emva kokhetho lukaNovemba 2016.
Impembelelo yeCoattail kwimbali
Isiphumo esinamandla se-coattail sivame ukuphumela kukhetho lonyulo, xa elinye iqela elikhulu lezopolitiko lizuza amaninzi emidlalweni kunomnye. Ngokuchasene ngokuqhelekileyo kwenzeka iminyaka emibini kamva, xa iqela likaMongameli lilahlekelwa zihlalo kwiCongress .
Omnye umzekelo wempembelelo ye-coattail ngowonyulo luka-2008 lwe-Democrat uBarack Obama kunye nepaki lakhe lezithuba ze-21 kwiNdlu ngaloo nyaka. IRiphabhlikhi uGeorge W. Bush , ngelo xesha, wayengomongameli abangabonakaliyo kwimbali yanamhlanje , ngokuyininzi ngenxa yesigqibo sakhe sokuhlasela i-Iraq kwinto eyayiba yimfazwe eyayiyithandabuyo ekupheleni kwekota yakhe yesibili. Ngoxa wayeyidonsa eRiphabhliki, u-Obama wayevuselela iinqwelo zamaDemokhrasi ukuvota.
"I-coattails yakhe ngo-2008 yayifutshane ngqiqo. Kodwa wakwazi ukuvuselela i-democratic base, ukhange inani elikhulu labasemagunyeni abavotayo, kwaye bancedise ukwandisa inani lokubhalisa kweqela ngendlela eya kwandisa abaviwa beDemocratic and down ithikithi, "wabhala abahlalutyi bezopolitiko uRhodes Cook.
AbaPhathiswa abancinci be-US
IsiCwangciso seSifundo seSpain Ukusebenzisa isitayela sakho sokuFunda
Inkcazo ye-Float ngo-C, i-C ++ ne-C #